XPath Injection Tutorial | Shwekoyantaw
Published : 7:36 PM Author : shwekoyantaw
Webiste တစ်ခုရဲ့ အရေးကြီး Data တွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ XML Document တွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ . User Information တွေ User Password တွေပေါ့.။ XML Document တွေရဲ့အားသာချက်ကတော့　လူတွေဖတ်ရခက်တာပါပဲ.။　အဲ့ဒီ့ Data Base တွေကို ချိတ်ဖို့ Xpath　( XPath Language )　ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Xpath Injection ဆိုတာ　ယင်း　Data Base အတွင်းသို့ By Pass လုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းပါပဲ.။
How XPath Work?
ပထမဆုံး　User ရဲ့　အရေးကြီး　Data Base များသိမ်းဆည်းထားသော　XML Document တစ်ခုကို　အရင်ကြည့်ရအောင်.။
အပေါ်ကဟာကတော့　User Information များသိမ်းဆည်းထားသော　XML Data base File ပါ.။　အကယ်၍　ကျွန်တော်တို့က　Administrator အကောင့်ရဲ့　Information ကိုယူမယ်ဆိုပါစို့　ဒါဆို XML Document နဲ့ချိတ်ဖို့　XPath Query ကို　ဒီလိုရေးပါ့မယ်
string(//Ghostarea_user[username/text()='Negative.Thunder' and password/text()='ilovehacking']/account/text())
အထက်ကအတိုင်းဆိုပြဿနာမရှိပါဘူး　ဒါပေမယ့်　Web Master ကများ　User Input ကို　Filter လုပ်မထားပဲ　အောက်ကလိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
string(//Ghostarea_user[username/text()='' or '1' = '1' and password/text()='' or '1' = '1']/account/text())
Attacker ဟာ　By Pass Access လုပ်နိုင်ပါပြီ.။
Username: ‘ or ’1′ = ’1
Password: ‘ or ’1′ = ’1
ဒါဆို　Attacker ဟာ　Access လုပ်နိုင်ပါပြီ　( Simple SQL Injection Attack ) လိုပါပဲ..သူကလည်း　ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲပေါက်သွားတာပါ
Note : ခုနက　XMP Document နဲ့ XPath ကိုပဲပြသွားလိုက်ပါတယ် Exploit Code နေရာမှာ တကယ့် Login Page ကတော့ ဒီလိုပါ.။
$login = simplexml_load_file(“Ghostarea_database.xml”);
$result=$login->xpath(“//Ghostarea_user[username/test()='".$_POST['Ghostarea'].” AND password/text()=’”.$_POST['testing123'].”‘”;
Ref : Hackloops
power by ghostarea